ပြည်သူချစ် ဇာတ်မင်းသားလေး ကိုဖိုးချစ် ရဲ့ ဖခင်ကြီး နောက်ဆုံးဝမ်းနည်းစရာဇာပနမြင်ကွင်း…. – Cele Oscar
ပြည်သူချစ် ဇာတ်မင်းသားလေး ကိုဖိုးချစ် ရဲ့ ဖခင်ကြီး နောက်ဆုံးဝမ်းနည်းစရာဇာပနမြင်ကွင်း….
September 26, 2021 By L YC Celebrity
ပရိတျသတျကွီးရေ ၊ မငျးသားဖိုးခဈြ ရဲ့ ဖခငျကွီးကတော့ပွီးခဲ့တဲ့ စကျတငျဘာ ၂၅ ရကျနေ့၊ ၂၀၂၁ မှာကှယျလှနျသှားခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။မိသားစု နဲ့ ထပျတူဝမျးနညျးရပါတယျ။အခုတဈခါမှာဆိုရငျ ကှယျလှနျသှားပွီဖွဈတဲ့ မငျးသားဖိုးခဈြ၏ဖခငျကွီးရဲ့ ဇာပန မွငျကှငျးကိုဖျောပွပေးသှားမှာပဲဖွဈပါတယျနျော။
၂၅ ၊ ၉ ၊ ၂၀၂၁ခုနှဈ၊စကျတငျဘာလ၂၅ရကျ၊ကနျ့ဘလူမွို့ ၊ မွို့ရှမေနျးသားဖိုးခဈြ၏မှေးသဖခငျကြေးဇူးရှငျ ဦးစိနျဝငျးသောငျးသညျ နအေိမျတှငျကနျြးမာရေးမကောငျးဖွဈပါတယျ။ဆေးကုသမှုခံယူနစေဉျ ၉၆ ပါးသောရောဂါဖွငျ့ ကှယျလှနျသှားပါ၍ သဆေုံးသူ၏ နောကျဆုံးခရီးအား Covid19 ရောဂါကာကှယျထိနျးခြုပျရေးဆိုငျရာလိုကျနာဆောငျရှကျရမညျ့ ညှနျကွားခကျြမြားနှငျ့အညီ သုသာနျသို့ပို့ဆောငျပွီးညနေ၎နာရီ၃၀အခြိနျ၌ဂူသှငျးသင်ျဂွိုလျပေးခဲ့ပါတယျဆိုပွီးရေးသားဖျောပွထားပါတယျ။
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ၊ မင်းသားဖိုးချစ် ရဲ့ ဖခင်ကြီးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့၊ ၂၀၂၁ မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မိသားစု နဲ့ ထပ်တူဝမ်းနည်းရပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာဆိုရင် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသားဖိုးချစ်၏ဖခင်ကြီးရဲ့ ဇာပန မြင်ကွင်းကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
၂၅ ၊ ၉ ၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလ၂၅ရက်၊ကန့်ဘလူမြို့ ၊ မြို့ရွှေမန်းသားဖိုးချစ်၏မွေးသဖခင်ကျေးဇူးရှင် ဦးစိန်ဝင်းသောင်းသည် နေအိမ်တွင်ကျန်းမာရေးမကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးကုသမှုခံယူနေစဉ် ၉၆ ပါးသောရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်သွားပါ၍ သေဆုံးသူ၏ နောက်ဆုံးခရီးအား Covid19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ သုသာန်သို့ပို့ဆောင်ပြီးညနေ၄နာရီ၃၀အချိန်၌ဂူသွင်းသင်္ဂြိုလ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
ပြည်သူချစ် မန်းမြို့ရွှေမန်းသားလေး ဖိုးချစ် ​ဖခင် ဆိုင်းပညာရှင်ကြီး ဦးစိန်ဝင်းသောင်း ကွယ်လွန်…….